ဘီပိုးကို နိုင်တဲ့ဆေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ဘီပိုးကို နိုင်တဲ့ဆေး
Posted by etone on Sep 3, 2010 in Health & Fitness |9comments
အရွက်ကတော့ ဗိန္ဒောဆေးအခေါ် *ဣဿရမူလီ* လို့ခေါ်တယ်။
ရှမ်းဘာသာကတော့ ၀မ်လီနုတ်ယုံး *(၀၊ခ်ေလီခေူဂ့်ယုင်း*) လို့ခေါ်ပြီး
အပွင့်က ဥဒေါင်းငှက်နဲ့ ဆင်တူပြီး အဖြူ။ အ၀ါ၊ အစိမ်း၊ ခရမ်းရောင်
အသီးကတော့ ကင်းမွန်သီးလို ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပြီး အရစ်(အရေးအကြောင်း) အမြောင့်ပါတယ်။
အရွက်ရဲ့ အရသာကတော့ နဲနဲဖန်သလိုလို၊ ကွမ်းရွက်ကဲ့သို့လဲ
သိရခြင်းပါ။ သူမအဖေရဲ့ မန္တလေး မိတ်ဆွေတစ်ဦး
ဘီပိုးရောဂါဖြစ်ပြီး ယိုးဒယား၊ စင်္ကာပူအထိ သွားကုတာ သိန်းပေါင်းများစွာ
ကုန်ပေမယ့် ရောဂါက မပျောက်ဖြစ်နေတယ်။
သူလည်း (၃)လလောက် အဲဒီအရွက်ကို အစိမ်းလိုက် တစ်နေ့ (၃)ခါ၊ တစ်ခါ လေးရွက်
ငါးရွက်လောက် ၀ါးစားပြီး ရေသောက်လိုက်တယ်။
အသားအရည်တွေ ၀င်းလာတယ်။ ကြည်လာတယ်။
ကျန်းမာရေးလည်း တော်တော်ကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်။ နောက် (၅)လ ကြာတော့ သူယိုးဒယားကို
ဟိုကဆရာဝန်တွေက အံ့သြစွာနဲ့ သူ့ရဲ့ ဘီပိုးရောဂါ လုံးဝပျောက်သွားကြောင်း၊
ဘာဆေးတွေ သုံးကြောင်း မေးလာတော့
သူက တိုင်းရင်းဆေး ဣဿရမူလီ ဆေးကိုသုံးကြောင်း ပြောလိုက်တယ်။ အခု
မှတ်ချက်။ ။ အယ်ဒီတာမှ ဓါတ်ပုံထည့်ပေးထားပါသည်။
ဣဿရမူလီရွက်ကို ဘယ်မှာရနိုင်ပါသလဲရှင် …… ကျွန်မရဲ့အမတယောက် ဘီပိုးရှိနေလို့ပါ….. ဒီဆေးနည်းကိုတွေ့တော့ ကျွန်မတော်တော်ဝမ်းသာသွားပါတယ် …… မန်းလေးက မနန်းမွေဖေါင်ဆီမှာရနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မသူနဲ့ဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်.. ကျေးဇူးပြုပြီး သူ့ကိုဆက်သွယ်လို့ရနိုင်မဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များရနိုင်မလားရှင် …
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုလို လက်ဆင့်ကမ်းရေးပေးတာ အရွပ်ပုံလေးပါ ဓါတ်ပုံလေးရှီရင်ကောင်းမယ်နော်
ဆေးဖက်ဝင်တာတော့ ရေးပါတယ်..။ အရေးလွန်တော့ လိုတရပျောက်စေဆေးကျနေတာပဲ..။
1.Hepatitis B is one of the major diseases inflicting human population. Conventional treatment with interferon – alpha is very expensive and has many serious side effects. Alternative herbal medicine using extracts of Phyllanthus niruri and Phyllanthus urinaria have been reported to be effective against Hepatitis B and other viral infections. A study reports quantitative determination of the anti viral effect of these herbs in well-defined in vitro systems.
Common name: Indian birthwort, हुक्का बेल Hooka-bel (Hindi), Isvaberusa (Kannada), Isvaramuli (Tamil), Esvaraveru (Telugu), Arkmula (Gujarati), Sampsun (Marathi), Garudakkoti (Malayalam)
Botanical name: Aristolochia indica Family: Aristolochiaceae (birthwort family)
Aristolochia indica isanative of India and Eastward. The Aristolochiales areagroup of flowering plants that have attractive leaves and flowers, often with bizarre colors or patterns, and so they are cultivated in gardens. Some oddly shaped flowers have been given names like “bird’s head” and “Dutchman’s pipe”. In this genus, the sepals are united intoalong curving tube which completely surrounds the reproductive structures. Often this tube is mottled or dark-colored, producingapungent odor that attracts pollinating flies. In addition to the foul-smelling species of Aristolochia that attract flies to pollinate them, other species are important for the survival of butterflies. There has been concern in India that since Aristolochia indica has become endangered, the swallowtail butterfly Tros aristolochae may also be endangered. This butterfly will only lay its eggs on Aristolochia vines, and its caterpillars make defensive use of the toxic chemicals they ingest. In fact most swallowtail caterpillars in the tribe Troidini feed on Aristolochiales foliage.
Photographed in Lonavala, Maharashtra.
Identification credit: Pravin Kawale
August လထုတ် သူရဇ္ဖ Magazine မှာ…စောငုဝါ(ပျဉ်းမနား) က ဣဿရမူလီ အပင်အကြောင်းရေးထားတာ ရှိတယ်။
အခုခေတ် ဘီ ပိုး ဆိုတာ ကြောက်စရာ မကောင်းတော့ပါဘူး
အသည်းခြောက်တာ ကို လုံးဝ လုံးဝ ပျောက်တဲ့ဆေးများရှိရင်တော့ပြောပြပေးကြပါ…….
အဲ့အပင်ကို ရန်ကုန်မှာ စိုက်လို့ရလား.. အရွက်ကော ရန်ကုန်မှာရှာလို့ရနိုင်လား.. သိချင်လို့ပါ